गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ ! - krishipost.com
गोलभेँडाको मूल्य प्रतिकिलो १२ रुपैयाँ !
घरानमा गोलभेँडाको मूल्य घटेको छ । धरानमा प्रतिकिलो ३० रुपैयाँमा कारोबार हुँदै आएको गोलभेँडा को भाउ घटेर प्रतिकेजी १२ रुपैयाँ पुगेको हो । निषेधाज्ञाका कारण होटेल, रेस्टुरेन्ट बन्द भएका कारण गोलभेँडाको खपत घटेको कृषिउपज बजारका व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराईले बताए ।
धरानमा निषेधाज्ञा अघि दैनिक ६० टनभन्दा बढी कारोबार हुने गरेकोमा अहिले दैनिक २५ टन मात्र गोलभेँडा बिक्रि हुदै आएको छ । निषेधाज्ञा जारी भएपछि धनकुटा,मोरङ, झापा लगायतका कृषकले लगाएका गोलभेडा बिक्रि नहुदा बारीमै कुहिन थालेका छन् ।